» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ८
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ८
२४ चैत्र २०७६, सोमबार १६:३२
मकवानपुर, २४ चैत । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । नेपालकै ठूलो भनेर दाबी गरिएको सिंगिङ रियालिटी शोको बुटवल अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् । यस भिडियो सिरिजको आठौँ भागमा हामी बुटवल अडिसनबाट छानिएका थप ४ जना प्रतियोगीहरु गोकुल पंगेनी, विद्यासागर पंगेनी, शिव बिक र चित्रबहादुर बिकका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
७) गोकुल पंगेनी– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि बुटवलबाट छानिएका सातौँ प्रतियोगी हुन् गोकुल पंगेनी । बर्दाघाट नवलपराशीका गोकुल पंडितको काम गर्छन् । भाईसँगै पंडितको काम गर्ने उनी गीत गाउन निकै रुचि राख्छन् । विद्यालय तहमा रहेकै समयमा गीत गाउन सिकेका गोकुलको दम्पत्ति नै संगीतप्रेमी भएको उनी बताउँछन् । उनले अडिसनमा सुरुमा ‘यति चोखो यति मिठो’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘यो मायाको सागर’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी दुई वटा गीत पश्चात दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
८) विद्यासागर पंगेनी– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि बुटवलबाट छानिएका आठौँ प्रतियोगी हुन् विद्यासागर पंगेनी । दाईबाटै प्रेरणा पाएर गीत गाउन सिकेका विद्यासागर दाईलाई नै आफ्नो आईडल मान्छन् । गोकुल पंगेनीका आफ्नै भाई विद्यासागरले अडिसनमा ‘अजम्बरी मायाको’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘ओराली लागेको’ बोलको गीत गाएका थिए । यसरी दुई वटा गीत गाएपछि उनी दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका थिए ।
९) शिव विक– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि बुटवलबाट छानिएका नवौँ प्रतियोगी हुन् शिव विक । शिव पेन्टिङको काम गर्ने उनी बताउँछन् । उनले अडिसनमा ‘तिम्रो नै माया’ बोलको गीत गाएका थिए । उनलाई निर्णायकहरुले दोस्रो गीत गाउन लगाएपछि उनले ‘गल्ती हजार हुन्छन्’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
१०) चित्रबहादुर विक– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि बुटवलबाट छानिएका दशौँ प्रतियोगी हुन् चित्रबहादुर बिक । उनले अडिसनमा ‘तिमी नै हौ’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा पहिलो नेपाल स्टार को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।